8.8.8.8 or 8.8.4.4 ?
Google ကနေ့ အလကားပေးနေတဲ့ Google Public DNS server address ပါ။
DNS ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် စာလုံးတွေနဲ့ ဖေါ်ပြတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာတွေကို IP address လို့ခေါ်တဲ့ IP နံပါတ်တွေကို ပြောင်းပေးတာပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေဟာ ၀က်ဘက်ဆိုက် လိပ်စာတွေကို နံပါတ်တွေအစား မှတ်ရလွယ်တဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ ဖေါ်ပြတဲ့ လိပ်စာတွေကို အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။
ဥပမာ http://www.facebook.com လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် DNS ကနေ http://69.63.181.15/ ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ 69.63.181.15 ပြောလိုက်ရင် ဘာမှန်းမသိပေမယ့် facebook လို့ဆိုလိုက်ရင် မှတ်လို့လည်းလွယ် ဘာဆိုက်မှန်းလည်း ချက်ခြင်းသိနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် DNS service ကို အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ ကုပ္မဏီတွေကနေ အလိုအလျှောက် ပေးပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ Google Public DNS ကိုသုံးမှာလည်း။
Google ဟာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက ၀က်ဆိုက်တွေကို download လုပ်နေရင်း ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေရဲ့ လိပ်စာတွေကို နေ့တိုင်းစစ်ဆေးပြီးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့စုစည်းပြီးဖြစ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို DNS အနေနဲ့ အသုံးချထားတာပါ။
ဒါကြောင့် Google Public DNS service ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေ ကြည့်ရှုရာမှာ ပိုမြန်ပြီး လုံခြုံရေးလည်း ပိုကောင်းစေမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Windows XP ကွန်ပြူတာစနစ်ကို အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ Google Public DNS ကို အသုံးပြုချင်ရင် အောက်ဖေါ်ပြပါနည်းအတိုင်း ကွန်ပြူတာမှာ ပြောင်းလဲပေးရုံပါပဲ။
၁။ control panel ကိုသွားပါ။
၂။ Network and Connections ကိုဖွင့်ပါ။
၃။ Wireless connection ကို အသုံးပြုသူဆိုရင် အဲဒီ connection ကိုဖွင့်ပါ။
၄။ ပြီးရင် properties window ကိုဖွင့်ပါ။
၅။ General Tab ထဲက Internet Protocol (TCP/IP) ကို ရွေးပြီး properties ကို နှိပ်ပါ။
၆။ ပေါ်လာတဲ့ Properties window က general tab ထဲမှာ DNS setting ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၇။ ပုံမှန်အားဖြင့် obtain dns server address automatically ကို ရွေးထားပါလိမ့်မယ်။
၈။ use following dns server address ကို ရွေးပါ။
၉။ prefer dns server နေရာမှာ 8.8.8.8 ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
၁၀။ alternate dns server နေရာမှာ 8.8.4.4 ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
Labels: 8.8.8.8, DNS, Google, Google Public DNS
အင်တာနက် စာမျက်နှာ ၄ ခု တစ်ပြိုင်တည်း ကြည့်ချင်ရင်
Tab တစ်ခုကနေ တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် Windows တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းရမှာ ပျင်းတယ်ဆိုရင်
အင်တာနက်စာမျက်နှာ ၂ ခုကနေ ၄ ခုအထိ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကြည့်ချင်ရင်
အောက်က ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို သုံးပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်
Labels: Google, googlegooglegooglegoogle
1. FarmVille 21,834,552 62,923,096 0.21
2. Causes 1,527,855 35,115,566 -0.29
3. Café World 7,536,758 27,977,880 1.65
4. Mafia Wars 6,498,562 25,669,578 0.09
5. Happy Aquarium (BETA) 5,861,258 22,752,109 1.53
6. Pet Society 5,147,096 21,521,684 0.47
7. We're Related 688,365 20,593,271 -0.96
8. YoVille 3,157,189 19,783,935 -0.07
9. Texas HoldEm Poker 4,057,431 18,755,446 0.07
10. Farm Town 4,759,570 18,482,725 -0.28
11. Restaurant City 5,129,559 18,012,216 0.58
12. Facebook for iPhone 8,012,748 16,788,696 0.63
13. Birthday Cards 692,392 16,101,060 -1.47
14. MindJolt Games 2,015,021 15,183,493 0.06
15. Roller Coaster Kingdom 2,352,363 14,518,281 1.62
16. Movies 430,057 12,949,124 -1.20
17. Quiz Monster 602,645 12,302,010 2.20
18. iLike 519,793 12,045,722 -0.29
19. LivingSocial 525,666 11,837,540 -2.28
20. MakeaQuiz! 120,715 11,808,336 -0.62
21. Top Friends 453,819 11,696,677 -0.49
22. How Well Do You Know Me? 610,110 10,783,186 0.39
23. Facebook® for BlackBerry® smartphones 6,029,273 10,626,804 0.44
24. Bejeweled Blitz 2,808,873 10,234,486 0.00
25. Slide FunSpace 398,853 10,135,347 -0.72
26. Mobile 4,398,915 10,043,611 -1.10
27. Fish World 2,128,335 8,527,256 -0.11
28. Country Story 1,659,530 8,342,134 -0.05
29. Super Wall 214,519 8,238,929 -0.73
30. FARKLE 1,417,461 7,164,655 -0.42
Bredolab ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အီးမေးလ် ကနေတစ်ဆင့် Facebook အသုံးပြုသူတွေကို တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ MX Lab ကနေကြေငြာသွားပါတယ်။
အဲဒီအီးမေးလ်ရဲ့ ပေးပို့သူနေရာမှာ လို့ဖေါ်ပြထားပေမယ့် တကယ့်အီးမေးလ် လိပ်စာကတော့ Facebook ဆာဗာကနေလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေးလ်မှာ attachement ပါလာပြီး ဖိုင်နာမည်ကတော့ Facebook_Password_XXXXX.zip လို့ပေးထားပါတယ်။ XXXXX နေရာမှာ ကျဘမ်း အက္ခရာနဲ့ ဂဏန်းတွေ ပါပါတယ်။
အဲဒီ ဇစ်ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ရင် Facebook_Password_XXXXX.exe ဆိုတဲ့ဖိုင် ကိုတွေ့ရပါမယ်။ ဒီ exe ဖိုင်ထဲမှာ Bredolab ဗိုင်းရပ်စ်ပါနေပါတယ်။
အီးမေးလ်စာသားမှာတော့ အောက်ကအတိုင်း ရေးထားပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် အသေးစိတ်ကို MX Lab ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Facebook ချစ်သူများအနေနဲ့ အဲဒီအီးမေးလ် ကို သတိထားကြပါ။
Labels: Bredolab, facebook, virus
How to prevent getting swine flu and what to do if you have it
Andrew Pekosz, an associate professor of molecular microbiology and immunology at Johns Hopkins University's Bloomberg School of Public Health in Baltimore, answers questions about H1N1 swine flu.
How can I tell if I have swine flu? And does it matter if it's that flu or the seasonal one?
Virtually all the cases of influenza occurring at this time are caused by 2009 H1N1. While individuals with severe flu-like illness are being tested to determine for certain which virus is causing the disease, there is no need for most people to get tested.
How do I know if I or someone in my family should go to the hospital?
Some key symptoms to watch for include rapid but shallow breathing, difficulty in breathing and lethargy or extreme weakness. A complete list of symptoms can be found at http://www.cdc.gov/h1n1flu/sick.htm#3
What is the best source of information about the H1N1 virus?
There are couple of Web sites that provide good general information on the H1N1 virus; the one I like for information to the general public is http://www.flu.gov, but be sure to check with your state or county public health department.
Who should get vaccinated? What are the priority groups?
There are several priority groups being targeted for vaccination while the vaccine is in short supply. The complete list is at http://www.flu.gov/individualfamily/vaccination/vprioritygroups.html but includes pregnant women, health-care and emergency medical personnel, household contacts or caregivers of children under the age of6months, anyone between the ages of6months and 24 years of age, and people age 25 to 64 who have underlying medical conditions.
What's the difference between nasal spray and injection? Who should get what kind?
The nasal-spray vaccine isaweakened form of the virus that does not cause influenza but does generateagood immune response. The injectable vaccine is an inactivated or "killed" form of the virus which is injected into the muscle of your arm. The nasal spray is only available to healthy individuals age2to 49, while the injectable vaccine is available toawider range of the population. More information is available at http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/general.htm.
If I can't get the vaccine right away, is it still worth getting it later?
Yes. . . . We are not certain how long the flu season will last, or if we will have several flu seasons or "waves" this year, so when vaccine becomes available, everyone should take advantage of it.
How quickly does the vaccination take effect? Is it possible to come down with the flu soon after getting vaccinated?
After three weeks, most people have an immune response that will protect them from infection with 2009 H1N1. The immune response begins to be detected seven to seven to 10 days after vaccination. The vaccines cannot cause the flu, but you certainly could catch influenza during the time after vaccination when your body hasn't developedastrong anti-influenza immune response.
Should everyone who comes down with the flu take Tamiflu or Relenza?
No. The CDC guidelines recommend that only individuals who are in high-risk groups should receive Tamiflu or Relenza at the first sign of symptoms. If you develop symptoms of severe influenza, then you should seek out medical treatment and begin to take Tamiflu and Relenza. For most people who will come down with the mild form of the disease, the use of Tamiflu or Relenza is not recommended in order to ensure enough of the drugs are available.
Original Link : http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/31/AR2009103101770.html
Labels: Flu, H1N1 2009, Health
အကို ကျွန်တော်တော့ စင်္ကာပူကို စိတ်နာသွားပြီ။
ဒီမှာ ၂ နှစ်လုပ်ခဲ့တာ ဘာမှလည်းမကျန်ဘူး။
ဒီလကုန်ရင် ကျွန်တော့် Work Permit သက်တမ်းကုန်တော့မယ်။
အဲဒါ မပြန်ခင် နေရာအစုံ ရောက်ဘူးအောင် လျှောက်သွားနေတာ။
ကျွန်တော်က နောက်ထပ် သက်တမ်းတိုးပေးဖို့ ပြောတယ်။
သူတို့က ကျွန်တော့်ကို Agent fee ထပ်ပေးရမယ်လို့ ပြောတယ်။
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်စလာတုန်းကအတိုင်း အပြည့်ထပ်တောင်းနေတာ။
ကျွန်တော် စလုံးကို စိတ်နာသွားပြီ။
ကျွန်မက အရင်တုန်းက Nurse နဲ့ လုပ်ခဲ့တာ။
ဒါပေမယ့် သူတို့က Agent ကနေ တစ်ဆင့်ပဲ ခေါ်တယ်။
သူတို့ HR တွေက Agent fee တစ်ဝက် ရတယ်ထင်တယ်။
သူ့ကို အလုပ်သွင်းပေးတာ သူ့အမတဲ့။
သူ့အမနဲ့ HR က အင်တာဗျူး၊ အလုပ်ခန့်ပြီး
တစ်ယောက် တစ်လခစီ ယူလိုက်တယ်။
စလုံးမှာ အခုနောက်ပိုင်း ဒါမျိုးကြီးပဲ
ကျွန်မကို ဒီနေ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက အင်တာဗျူးခေါ်တယ်။
စီးတီးဟောလ် နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ခုမှာ။
ပြီးတော့ ကျွန်မကို ပြောသေးတယ်။
S-pass တင်ပေးဖို့ ၁၀၀ (စလုံးငွေ) ပေးရမယ်တဲ့။
အဲဒါ ကျွန်မ သွားလိုက်ရင် ကောင်းမလား။
ဟုတ်တယ် ကျွန်မလည်း အဲဒီလို ၁၀၀ စီ
ကျွန်မတို့ ကျောင်းက ဆရာက မိတ်ဆက်ပေးတာ။
ဒါပေမယ့် ဆရာက သူကို ၃၅၀၀ ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုရင် ကျွန်မ လခထဲက နှိမ်လို့ရမလားလို့
သူတို့က Agent fee ၆၀၀၀ ၊ ၇၀၀၀ တောင်ပေးရတာ။
သူကိုခန့်တဲ့ သူဌေးက ယူလိုက်တာပေါ့။
ဒီပိုက်ဆံနဲ့ သူတို့ကို လခပြန်ပေးနေတာပေါ့။
အဲဒီတော့ Agent fee အကုန်လုံး သူတို့ အိပ်ထဲရောက်တာပေါ့။
တစ်နေ့မှာ ၁၈-၂၂ ကျပ်ရတာ။
ဒီ Agent fee ကျေအောင် မနည်းရှာရတာ။
အိုတီ (အိုဗာတိုင်) မှ မရရင် သူတို့ ပျာနေတာ။
Google ဂမ္ဘီရဘက် ရောက်သွားပြီလား။
ဟိုနေ့က Mystery Google ဆိုပြီးတွေလိုက်တယ်
အဲဒီထဲမှာ "myanmar" ဆိုတာကို ရှာကြည့်တော့ "yoyo" ကိုရှာတာ ထွက်လာတယ်။
လေးဖြူကို ရှာကြည့်တော့ "Please don't type gibberish." တဲ့။
"What is Mystery Google" ကို ရှာကြည့်တော့ "That is the site you are on." တဲ့။
အဲဒါဆို Mystery google ဟာ ဘာလဲ။
နောက်တခါ "myanmar" ကို ထပ်ရှာကြည့်တော့ "whiteout" ဆိုပြီးထွက်လာပြန်ရော။
ဒါဆို ပရမ်းပတာ အဖြေတွေ ရှောက်ပြနေတာလား။
မဖြစ်သေးပါဘူး။ ရိုးရိုး Google မှာ "Mystery Google" ကို ရှာကြည့်တော့
"You get what the person before you searched for" တဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကလူ ရှာသွားတဲ့ ဟာ ကိုယ့်ဆီမှာ လာပြနေတာကိုး။
ကဲ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်ကို ရောက်မယ့် စာလုံးတွေ များများရှာ၊
ဒါမှ လူများတွေ ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်ကို ရောက်လာမယ်။
Google facebook joke 8.8.8.8 Birthday Party Bredolab DNS Flu Google Public DNS H1N1 2009 Health Life Mystery Swimming Day application children learning foreword fun gmail good technique googlegooglegooglegoogle news virus youtube စင်္ကာပူ ၅၂၈ မေတ္တာ